Filtrer les éléments par date : mercredi, 24 février 2021
- Mitsagantsangana ny etsy avaradrano
- Mamboly hazo ny etsy atsimondrano
- Manao radio fan club ny etsy anilany
- Manokatra radio Mille et Une collines ny andaniny
- Zaza hendry ny ahy hoy ny ray
- Zaza tsara taiza koa ny anay hoy ny ilany
- Manana vahoaka be izahay ho ny ankilany, tsy misy sakatsakana
- Tsy ambakan'izany koa ny anay raha tsy nisakanana sy nosamborina hoy ny ilany
Dia izay ve sisa izy ty ? Ambavako ambavanao sy taim-bava ary hogahoga, dia samy mifanao angaredona eo ny atsy sy eroa.
Mila mandry nareo fa reraka e
mercredi, 24 février 2021 16:31
Volamena 73.5kg : Nidoboka any Tsiafahy ilay douanier Toliara
Natolotra teo anivon'ny fitsarana manokana miady amin'ny kolikoly na ny PAC ny agent d’encadrement des douanes en service à Toliara, notazonina vonjy maika eny Tsiafahy avy hatrany izy, noho ny tsirambina tamin'ny fisavana manontolo ny fiaramanidina sy ny entana nentiny, ka tsy nahitana ilay volamena 73.5kg.
mercredi, 24 février 2021 14:37
Banky : Tsy hita ny fanarahana ny baikon'ny Filoham-pirenena
Vao nanomboka kelikely ny volana marsa 2020 ny fihibohana vokatry ny valanaretina Covid-19 dia nanome torimarika mazava ny Filoham-pirenena fa ahato aloha ny fanonerana ny vola sy zana-bola notrosaina tamin'ny banky, indrindra fa ho an'ireo orinasa izay voatery nakatona sy nampihato ny asa.
Tsy izany anefa no niseho, fa ny banky maro, sy ireo micro-finance dia nampihatra fanasaziana ara-pahataràna avokoa, na ny pénalié de retard, nitaky ny trosa sy ny zana-bola.
Maro ireo orinasa, ny mpamboly sy mpiompy ary ny mpivarotra sy mpanao asa tanana ankehitriny no tsy tafarina, ao ny nalaina ny antoka natao tamin'ny fitrosana, ny mampalahelo dia misy aza banky, izy ihany no maka ny fananan'olona ary amidiny mora amin'izy samy izy ao ihany ny tranon'olona natao antoka, misy ny manery ankolaka ny mpitrosa hafa haka sy hividy ny fiara nataon'ny mpitrosa hafa antoka, ka sady voaloa ny volan'ny banky tamin'ilay mpitrosa voalohany, no mbola nampanaovina antoka hafa indray koa ny mpitrosa faharoa.
mercredi, 24 février 2021 14:31
Sosialy : "Fiatrehana ny voina sy fanarenana"
"Fiatrehana ny voina sy fanarenana" dia tetikasan’ny Governemanta Malagasy ho fanampiana ireo ankohonana miisa 298 000 voalahatra ho marefo indrindra, hiarina noho ny voka-dratsin'ny valanaretina COVID-19. Natao koa izany hanalefahana ny vokatry ny haintany ho an’ny ankohonana miisa 100 000 any amin’ny faritra atsimo.
Fandaharanasa 4 :
1- Ankohonana Miatrika : Vatsy ara-bola sy tantsoroka
Lelavola 50.000 ariary isam-bolana, isan-tokantrano, mandritra ny dimy volana. Izany hoe in-dimy mandray 50.000 ariary ny ankohonana iray.
Faritra aiza ?
Ireo fokontany tratry ny fihibohana ary voafaritra ho marefo indrindra araka ny fanambarana ataon'ny Ministeran'ny Mponina (MPPSPF) sy ny BNGRC.
Fisoratana anarana sy fandraisana ny vola
Holazaina eny an'ivon'ny fokontany ny toerana sy fotoana fisoratana anarana ary ny fandraisana ny vola. Ilaina ny kara-panondro sy ny kara-pokontany.